Vatariri From kuGenoa To Florence By Train | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Italia > Vatariri From kuGenoa To Florence By Train
kuGenoa, ndiro chikamu Rome uye Florence, ndiro guta guru Italy kuti Tuscany nharaunda, dzakakurumbira mushanyi dzokugara and hence the route from Genoa to Florence is popular and frequently traveled route and a distance that can be communicated with ease. Genoa is located Italy kuti kumadokero chikamu muna Liguria nharaunda, anozivikanwa nezvebasa rinokosha muchinangwa nepagungwa kutengeserana pamusoro emakore. Florence iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero munzvimbo chikamu Italy uye anozivikanwa nokuda vakawanda uye zvakasiyana-siyana ounyanzvi pamusoro Renaissance akitekicha uye iwe, izvo zvinowanikwa zvose pamusoro nzvimbo.
Pane zvakawanda nzira kuenda uye kuti vaviri. The inoita uye uchitsanya nzira zvokufamba hadzisimbori ndiyo KuGenoa kuna Florence Train.
KuGenoa kuna Florence chitima
Kune pamusoro 28 KuGenoa kuna Florence Zvitima yokutanga chitima kuenda pa 00:02 uye yokupedzisira chitima ngaubve kuGenoa pa 19:56. Vazhinji nezvitima izvi zvakagadzirirwa zuva kufamba; zvisinei, ari zvitima kuti vanomhanya usiku kana mangwanani zvinoodza kuva akarara Services. The rwendo nguva yokuti KuGenoa kuna Florence chitima ndezve 2 maawa uye 58 maminitsi, riri nokuti rakananga chitima pamwe havashanduki. Kana pane kuchinja mid-nzira kuti rwendo nguva yokuti KuGenoa kuna Florence chitima inogona kusvika 3 maawa uye 33 maminitsi, izvo zvinogona zvakare zvichienderana pazuva kufamba.
Pane vanozivikanwa kuti nezvitima vashoma pamusoro kwevhiki uye mazororo. Izvi zvinowanzoita kuti kukanganisa rwendo nguva uyewo. Vazhinji nguva yakanakisisa Ipfungwa yaizova pakuongorora zvitima sezvo paminiti musi zvokufamba yako, izvo kuti dzipe yakajeka kusvikira riini KuGenoa kuna Florence Train anonzi uye zvakadini kuti rwendo nguva aizova.
KuGenoa kuna Florence: Other modes okufamba
KuGenoa kuna Florence munhu akakurumbira nzira uye kunogona yakadyidzana Via bhazi, chitima kana kunyange mugwagwa. Mumwe nomumwe modes okufamba ane kunyange vaiva nguva rwendo nezvimwe parameters zvinofanira akatarira. Pane "RideShare" Ipfungwa iripo izvo zvichida yakachipa pashiri nzira kufamba iri nzira uye anogona kutora pamusoro 3 maawa yokufamba kupera. Panewo nezvechisarudzo kufamba nebhazi, izvo zvinotora inenge 4 maawa. zvisinei, pane chete 2 nemabhazi ichi nzira. Yokupedzisira kusarudza kufamba kunoenderana iwe kana munhu aifamba zvichienderana chii zviri nyore uye vakasununguka sezvo pa zvavo zvaunofarira.
Buying Genoa to Florence train tickets saves you valuable time and “Save a Train” gives you an opportunity to get your Genoa to Florence tickets online. Munokwanisa kuwana discounts zvakanaka Mugshot nguva nenguva, ndapota Tsvaka SaveATrain to check their services and price before you book your Genoa to Florence matikiti.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ane batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-from-genoa-to-florence%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#genoa matikiti nezvitima travelflorence